गर्मी को लागी Purificación García को नयाँ प्रवृत्ति बेजिया
गर्मी को लागी Purificación García बाट नयाँ प्रवृत्ति
मारिया vazquez | 29/04/2021 18:00 | मैले के लगाउने?
जाडोको मध्यमा हामीले हालको एउटा सानो पूर्वावलोकन भेट्टायौं Purificación García को संग्रह। एक धेरै विस्तृत SS21 संग्रह जसको उपन्यासहरू बीचमा हामी फर्मको तीन नयाँ प्रवृत्ति फेला पार्दछौं। के तपाईं अनुमान गर्न सक्नुहुन्छ तिनीहरू केवल कभर छविहरूबाट हुन्?
तपाईंले सायद उनीहरूलाई अनुमान गर्नुभयो। पहिलोको यसको रंगमा रंग छ; विशेष रूपमा, गहिरो सुन्तला रंग बाँकी व्यक्तिले दुई प्रकारका प्रिन्टहरू सन्दर्भ गर्दछ: स्ट्रिप गरिएको प्रिन्ट र बोटानिकल वा फ्लोरल प्रिन्ट। तीन प्रवृत्तिहरू, यद्यपि, स्पेनिश फर्मको नयाँ स in्ग्रहमा केवल ती मात्र होइन।
3 पुष्प प्रिन्टहरू
प्युरिफिसियन गार्सिया संग्रहमा नारंगी तारा star्कित गर्नु आश्चर्यजनक छ। हामी यसलाई फेला पार्दछौं कलात्मक प्रिन्ट संग टुक्राहरू बिना स्लिभलेस सुखी मिडी पोशाक र लापेलको साथ लामो बगिरहेको शर्ट, थप ठूला जेबहरू र साइड स्लिटहरू। तर सादा कपडामा पनि, फ्रिन्जहरू वा अशुद्ध छालाको ज्याकेटको साथ ओभरसाइज रिबिड लाइनको साथ अनस्ट्रक्चर गरिएको ज्याकेट। गारमेन्टहरू जुन फर्म अन्य सेता मानिसहरूसँग मिलाउन हिचकिचाउँदैन।
क्षैतिज र ठाडो पट्टिहरू, पातलो र बाक्लो पट्टिहरू ... विभिन्न प्रकारका पट्टिहरू पुरिफिसिअन गार्सियाका उपन्यासहरू बीच उभिन्छन्। सबै, तथापि, साझामा एक विशेषता साझा, तिनीहरू कालो र सेतोमा प्रस्तुत छन्। यस प्रिन्टको साथ तपाईले फ्ल्यान्ड ड्रेस, सिधा पतलून र डबल-ब्रेस्टेड ज्याकेटहरू पिनस्ट्रिपको साथ हनीकम्ब-ईफ्याक्ट कटनमा फेला पार्नुहुनेछ। यद्यपि यो फ्लेर्ड मिडी स्कर्ट र तेर्सो पट्टिहरू भएको कपासको ज्याकेट हुन सक्छ जुन तपाइँको ध्यान सबैभन्दा आकर्षित गर्दछ।
पहिलो बोटानिकल, उज्यालो र बहुरंगी। दोस्रो फ्लोरल कालो र सेतोमा पहेंलो रंगको साथ। के तपाइँसँग पहिले नै तपाइँको मनपर्ने छ? गोलो नेक्लिनको साथ पन्च नायलॉनमा बेलुन कट ट्रेंच कोट र फिक्का छोटो बाहुलाको साथ ग्रेन्ड क्रेपमा मिडी पोशाक र बेलुन कट स्कर्ट बोटानिकल प्रिन्टको साथ हाम्रो मनपर्दो टुक्रा हुन्।
ती मध्ये कालो र सेतो फ्लोरल प्रिन्ट हामी विशेष गरी छोटो सीधा-रेखा पोशाक र ट्राउजरद्वारा टकराउँदछौं, दुबै विरोधाभासी पाइपिंग विवरणहरूको साथ क्रेपमा। यद्यपि हामी बमोजर ज्याकेटको उल्लेख गर्न रोक्न चाहँदैनौं किनकि यो गर्मीमा धेरै भिन्न पोष्टहरू पूरा गर्न एक ठूलो सहयोगी बन्न सक्छ।
तपाइँ गर्मी को लागी Purificación García को प्रस्ताव मनपराउनु हुन्छ?
लेखको पूर्ण मार्ग: बेजिया » फेसन » मैले के लगाउने? » गर्मी को लागी Purificación García बाट नयाँ प्रवृत्ति
कसरी मौसा हटाउने